Happy New Year In DUBAI...! | အိမ်လွမ်းသူ...
2012 Firework of Burjkalifa DUBAI...လူတွေများနေလို့ ရှေ့ကိုရောက်အောင်မနည်းသွားရတယ်...!ညနေ 5နာရီထဲကဗီဒီယို ရိုတ်ချင်လို့ သွားစောင့်နေရတယ်...!သူငယ်ချင်းတွေက ည10နာရီမှလာတာ လာလို့မရတော့ဘူး...!တစ်ယောက်ထဲ ကဲခဲ့ရတဲ့ new year...!ဗီဒီယိုရိုတ်ရတာ ခြွေးတောင်ပြန်တယ်ဗျာ...!သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ကြည့်လို့ရအောင် ကြိုးစားပြီး ရိုတ်လာခဲ့တယ် မကောင်းရင်အပြစ်မပြေားနဲ့နော်..!TAXI..ခလည်းတော်တော်ကုန်သွားတယ်...!
Burj Al Arab (ရွက်လှေ ဟိုတယ်..)
Barj Kilifa (ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦး..)
အားလုံးနှစ်သစ်မှတည် နောင်နှစ်တစ်ရာမက ပျော်ရွှင်မှု့အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေ....!
No Response to "Happy New Year In DUBAI...!"